ဗီဒီယိုချက်တင်အခန်းပေါင်း၊အွန်လိုင်းထုတ်လွှင့် - ဗီဒီယိုချက်တင်။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့!
Donde conoceraun ciudadano de alemania. Foro sobre el estudio de la lengua alemana, de la vida y estudios en alemania
စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ချက်တင်ကစားတဲ့ ချိန်းတွေ့ဆိုက် ကျပန်းချက်တင် ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့မပါဘဲဗီဒီယို ဆှဗီဒီယိုစကားပြောခန်းစုံတွဲများအဘို့ ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ချိန်းတွေ့အခမဲ့။ ဒေါက်ချိန်းတွေ့ အွန်လိုင်းချက်တင်ကစားတဲ့မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း